ခင်ဦးမြို့နယ် တရားသူကြီး အပါအဝင် သုံးဦးကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင?? - Yangon Media Group
တိုင်ကြားစာအရ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းစစ် ဆေးခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခင်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးတွင် သစ် တောဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂(ခ)အရ စွဲ ဆိုခဲ့သည့် ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ် ၃၁၉/၂ဝ၁၇ အမှုအား အမိန့်ချ မှတ်သည့်နေ့တွင် တရားခံရှေ့နေ ဒေါ်ဇာခြည်ဝင်းသည် မြို့နယ တရားသူကြီးနှင့် တရားရုံးဝန်ထမ်းများ ပေးရန်ဟုဆိုကာ တရားခံ၏မိခင် ထံမှ စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၃ဝ၂ဝဝဝဝ/- ကိုတောင်းခံရယူခဲ့ကြောင်း၊ ခင်ဦး မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်ရည်ရည် မွန် (တ/၂၈၇၃) (ယခု ကျောက် တံခါးမြို့နယ်တရားသူကြီး)သည် ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ ကိုရယူ၍ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် ¤င်း၏ ရာထူး တာဝန်ကိုအလွဲသုံးစားပြု၍ အဂတိလိုက်စားမှု ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်ရည်ရည်မွန်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရလည်း ကောင်း၊ တရားခံ၏မိခင်ထံမှ ငွေ များတောင်းခံရယူရာတွင် အား ပေးကူညီခဲ့ကြသည့် ရှေ့နေ ဒေါ်ဇာ ခြည်ဝင်းနှင့် ခင်ဦးမြို့နယ်တရားရုံး ရုံးစောင့်/သန့်ရှင်းရေး ဦးရဲဝဏ္ဏတို့အပေါ် ဤဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆/၆၃ အရလည်းကောင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ် တရားရုံး ရုံးစောင့်/သန့်ရှင်းရေး ဦးရဲဝဏ္ဏသည် ခင်ဦးမြို့နယ် တရားရုံး ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ် ၃၁၉/ ၂ဝ၁၇ အမှုအား တရားရုံးတွင် စစ် ဆေးနေစဉ် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ကာလအတွင်း တရားခံ၏မိခင်ထံမှ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ၍ ငွေကြေးများတောင်း ခံရယူခဲ့ခြင်းသည် အမှုသည်ထံမှ တံစိုးလက်ဆောင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဦးရဲဝဏ္ဏအပေါ် ဤဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ အရလည်းကောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့မရဲစခန်းတွင် ၁၆-၅-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့၌ ပထမ သတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍တရားစွဲဆိုအရေး ယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်ဇာခြည် ဝင်းနှင့် တရားရုံးရုံးစောင့်/ သန့်ရှင်း ရေးဦးရဲဝဏ္ဏတို့အား ဖမ်းဆီးရရှိပြီး ခင်ဦးမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရမန်ရယူ ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တရား လွှတ်တော်တွင် တရားစွဲတင်နိုင် ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ခင်ဦးမြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ် ရည်ရည်မွန် (တ/၂၈၇၃) (ယခု ကျောက်တံခါးမြို့နယ်တရားသူကြီး)မှာ တိမ်းရှောင်နေသဖြင့် အမြန်ဖမ်း ဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် လွှတ်တော် အဆောက်အုံအား ဒရုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးရန်ပြင်ဆင်သည့် တူရကီသတင်းသမားများ အပ
မြန်မာ၏ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိ??